Ngalaba njem na nke njem na-echebe ụmụaka gafere ụlọ ọrụ na nzukọ nzukọ nke mba ụwa
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Colombia » Ngalaba njem na nke njem na-echebe ụmụaka gafere ụlọ ọrụ na nzukọ nzukọ nke mba ụwa
Ndị nnọchi anya ụwa niile nke gọọmentị, azụmaahịa ndị njem, ndị ọrụ mmanye iwu, UN na ọha mmadụ na-ezukọ na Bogotá taa iji kwenye na usoro ogologo oge na omume iji kwụsị mmekpa ahụ na mmegbu nke ụmụaka na ụlọ ọrụ njem.
The Nzukọ Mba Nile Maka Nchedo Childmụaka na njem na njem nleta, nke Gọọmentị Colombia kwadoro na mmekorita ya na Tastù Task Force High-Level na Nchedo Childmụaka na njem na njem nleta; UNICEF; UNODC; WTTC na ECPAT International ga-achịkọta ihe karịrị ndị sonyere 400 sitere na mba iri abụọ na ise itinye aka na mmemme siri ike. Nke a ga-agụnye ikwe nkwa iji mata banyere imetọ ụmụaka; igbochi ahia umuaka; na-agbaso ụkpụrụ omume; na-achịkwa 'afọ ofufo' na ụlọ ọrụ ebe ụmụaka nọ; na ịbawanye ọzụzụ nke ndị ọrụ iji mata mgbe ụmụaka nọ n'ihe ize ndụ nke ịzụ ahịa ma ọ bụ na-erigbu mmekọahụ.
Sandra Howard Taylor, onye osote Mịnịsta na-ahụ Maka Njem Nleta nke Gọọmenti Colombia, na onye ọbịa nke mmemme ahụ kwuru, "Summit a bụ ihe atụ nke ntinye aka nke Gọọmenti Colombia maka ọrụ njem nleta. “Anyị na-agba mbọ igbochi erigbu ụmụaka na njem. Nsonaazụ kachasị na nzukọ a ga-abụ ịbịanye aka na nkwupụta sitere n'aka ndị ọrụ nzuzo na ndị ọrụ ọha na eze, iji mezuo iwu na omume iji kpuchido ụmụaka. Colombia bụ obodo amaara maka ọtụtụ ezigbo omume na njegharị ma mee ọtụtụ ihe, gụnyere ichebe ụmụaka. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ndị njem niile dị na Colombia, ihe dị ka 25,000, esonyela na mmemme gọọmentị na-eme maka njem nleta na igbochi mmekpa ahụ nke ụmụaka. ”
A na-atụ anya ka ndị nnọchiteanya kwenye na atụmatụ, kwekọrịtara na 2030 Agenda for Sustainable Development iji mejuputa atụmatụ nke Ọmụmụ ihe ụwa banyere mmekọahụ nke ụmụaka na njem na njem nleta. Ọtụtụ n'ime ndị nọ na nzukọ a na-arịọ ndị gọọmentị, ndị ọrụ nke onwe ha, ndị ọrụ mmanye iwu, ndị ọrụ UN na ndị otu ọha na eze ka ha chebe ụmụaka nke ọma n'ịzụ ahịa na ndị na-eme mpụ ụmụaka. Nke a gụnyere, ọkachasị, nhazi ọzọ n'etiti gọọmentị na ụlọ ọrụ.
N'ikwu okwu n'aha World Travel & Tourism Council (WTTC), ikike zuru ụwa ọnụ na ntinye akụ na ụba na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na njem nlegharị anya, Helen Marano, onye isi oche onye isi ala, kwuru, sị, "Nzukọ ụbọchị taa bụ ihe dị mkpa iji mata ọtụtụ ụlọ ọrụ na bụ ndị na-ebu ọkọlọtọ na ngalaba maka okwu a dị oke mkpa. Ha na-abụ ihe mmụọ nsọ maka azụmaahịa niile iji kwado mkpa nchebe ụmụaka na ọzụzụ na arụmọrụ kwa ụbọchị. Nkwupụta ndị a ga-ekwupụta na nkwupụta ahụ ga-akpali mmekọrịta siri ike. WTTC na-esote nkwa siri ike ya na ndị otu Kansụl na-akwado iji kwado mkpa dị mkpa maka nchekwa ụmụaka n'ụdị niile na njem njem na njem nleta. Anyị nwere obi ụtọ maka nkwado nke ndị sonyere Summit ma gbaa ndị otu ụlọ ọrụ ume ịgbaso otu a. ”
Ngalaba njem na nke njem emeela nke ukwuu na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ na - enye 10.4 pasent na GDP ụwa na 1 na ọrụ 10, yana ịkọwapụta 4 pasent nkezi kwa afọ na afọ iri na - esote. Worldtù UN World Tourism Organisation na-eme njem njem 1.8 ijeri na 2030. Ọganihu a na-enye ndị njem niile ohere ma dị mfe ma na-egosi mkpa ọ dị maka usoro siri ike maka nchebe ụmụaka.
Ọtụtụ mba enweghị iwu zuru oke iji kwụsị ma ọ bụ gbochie ndị omekome na-eme mpụ ụmụaka, ndị na-ejikarị ịda ogbenye, enweghị ike mmekọrịta ọha na eze, na iwu adịghị ike na-enye ọdịbendị nke ntaramahụhụ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ịbawanyewanyewanyewanyewanyewanye ọhụrụ na njem na njem njem agbakwunye agbakwunyere ihe egwu. Tụkwasị na nke ahụ, Intanet na-eme ka ohere ịnweta nhọrọ njem, mana ọ nwekwara ike ime ka ihe egwu nke ụmụaka na-eme mpụ na-emegbu ụmụaka na-erigbu ụmụaka.
Maka ndị lanarịrị ịrigbu mmekọahụ, ihe nketa ahụ gụnyere mbibi anụ ahụ siri ike na nke dị ogologo ndụ, nke mmetụta uche na nke mmụọ. Nke a bụ mpụ na-emebi obodo, mebie ezinụlọ na ugwu ọdịbendị, ma mebie atụmanya akụ na ụba nke ọha mmadụ.
Ọnọdụ dị ike. N'afọ iri ole na ole gara aga, echiche e nwere ebe nile bụ na ndị na-eme mpụ na-eme mpụ n'ụzọ mmekọahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị site na mba ọdịda anyanwụ wee gaa mba ndị dara ogbenye, na-emepe emepe. Taa, anyị maara na ọdịiche dị n'etiti njedebe, njem na mba ndị sitere na-adịghị ọcha na profaịlụ nke ndị mmejọ dị iche iche.
N'ihi na nke a bụ oke-oke na ngalaba ngalaba, na-akwụsị mmekpa ahụ ụmụaka na njem na njem nleta chọrọ mmekọrịta ụwa na mmekọrịta mmekọrịta. Enwere mkpa ịhapụ site na nzaghachi nchedo ụmụaka na-ezighi ezi na mba ọ bụla gaa n'ụzọ zuru ezu. Nzukọ Mba Nile Maka Nchedo inmụaka na Njem na Njem Nleta na Bogotá, Colombia bụ mgbalị iji kpọkọta ndị isi ụwa 50 sitere na gọọmentị, ndị ọrụ nzuzo, ndị ọrụ mmanye iwu na ndị otu na-ahụ maka ọha na eze imezu nke a.
Nzukọ a bụ ihe na-esochi nke Ọmụmụ ihe ụwa banyere mmekọahụ nke ụmụaka na njem na njem nleta, nke mbụ ndị mmekọ 67 gbakọtara ọnụ iji ghọta ọdịdị ụwa na oke mpụ a. Ọmụmụ ihe ahụ na-akọwapụta ndụmọdụ ga-achọ imekọ ihe ọnụ site n'aka UN, gọọmentị, NGO, ndị uwe ojii, na azụmahịa ndị lekwasịrị anya. Nzukọ a ga-enwe nkwekọrịta banyere otu esi emezue atụmatụ ndị a.
Ebumnuche Sustainable Development na Agenda 2030 gụnyere mgbadoro anya maka njem nleta na-akwụsị na ime ihe ike megide ụmụaka. Mgbakọ ahụ ga-azụlite ụzọ nke ndị niile metụtara ya ga-ekwenye itinye aka iji mejuputa Agenda 2030.
Banyere WTTC: The World Travel & Tourism Council bụ ikike zuru ụwa ọnụ na ntinye akụ na ụba na nke mmekọrịta nke Travel & Tourism. Ọ na-akwalite ọganihu na-adigide maka mpaghara ahụ, soro ndị gọọmentị na ụlọ ọrụ mba ụwa na-arụ ọrụ iji mepụta ọrụ, iji chụpụ mbupụ ma mepụta ọganihu. Kwa afọ WTTC, ya na Oxford Economics, na-ewepụta akụkọ ya Mmetụta Mmetụta Mmetụta, nke na-eleba anya na uru mmekọrịta akụ na ụba nke njem na njem na njem zuru ụwa ọnụ, mpaghara na mba. N'afọ a akụkọ ahụ na-egosi data gbasara mpaghara mpaghara 25 na mba 185. Ngalaba ahụ na-etinye ijeri US dolla 8.3 ma ọ bụ pasent 10.4 nke GDP zuru ụwa ọnụ, ozugbo a na-etinye mmetụta niile, mmetụta na enweghị mmetụta na akaụntụ. Ndi oru a choro oru oru 313 ma obu otu n'ime oru iri nile n'uwa.
Banyere UNICEF: UNICEF na-arụ ọrụ na ụfọdụ ebe kacha sie ike n'ụwa, iji ruo ụmụaka kachasị nwee nsogbu n'ụwa. N'ime mba na ókèala 190, anyị na-arụ ọrụ maka nwatakịrị ọ bụla, ebe niile, iji wuo ụwa ka mma maka mmadụ niile. Soro UNICEF na Twitter na Facebook
Banyere UNODC: Officelọ Ọrụ Mba Ndị Dị n’Otu nke Ọgwụ na Mpụ bụ onye ndu ụwa na-alụso ọgwụ ọjọọ na mpụ mba ụwa ọgụ. Ọ na-arụ ọrụ na mpaghara niile nke ụwa site na netwọkụ sara mbara nke ọfịs ubi. Ọrụ ya gụnyere inyere ndị steeti aka ịkwado ma mejuputa nkwekọrịta mba ụwa dị mkpa yana ịzụlite iwu ụlọ banyere ọgwụ ọjọọ, iyi ọha egwu na mpụ, dị ka mgbere mmadụ. Kemgbe afọ 2015, UNODC eduola mmemme akpọrọ "Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants," nke ndị European Union kwụrụ ụgwọ ma tinye n'ọrụ na mmekorita ya na thetù Mba forwa Maka Mbugharị na UNICEF, nke ruru mba 13 n'ofe Africa. , Eshia, Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe na Latin America. Ọrụ a dị n'okpuru 2030 Sustainable Development Agenda, nke na-akpọ ka njedebe nke ịzụ ahịa na ime ihe ike megide ụmụaka.
Banyere Task Force dị elu na nchekwa ụmụaka na njem na njem nleta: Ndị ọrụ ọrụ dị elu duziri mmepe nke Ọmụmụ Ihe Globalwa Nile banyere Mmekọahụ nke Childrenmụaka na Njem na Njem Nleta. Iwu ya bu mkpochapu umuaka umuaka site na mmejuputa aro nke omumu ihe uwa.
Banyere ECPAT: ECPAT International bụ netwọkụ zuru ụwa ọnụ nke nzukọ ndị raara nye ịkwụsị mmegbu ụmụaka. Site na ihe karịrị 100 ndị òtù na mba 93, ECPAT lekwasịrị anya ịkwụsị ịzụ ahịa ụmụaka maka ebumnuche mmekọahụ; nwa na alụmdi na nwunye n'ike; ịkpafu ụmụaka n'ịntanetị; na nrigbu mmekọahụ nke ụmụaka na mpaghara njem na njem nleta. ECPAT International Secretariat dị na Bangkok Thailand. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na www.ecpat.org
Mmeri maka ịhụnanya na njem nleta: mulọikpe Kasị Elu nke Bermuda kagburu mmachibido iwu alụmdi na nwunye nwoke na nwanyị
Kọmitii Nchedo Mba: Americanmụaka America na-anwụ mgbe ndị nne na nna na-apụ na ya